Momba anay - Shandong Kunda Steel Co., Ltd.
Ny orinasanay dia sampan'ny Laiwu Steel ary naorina tamin'ny taona 2010 miaraka amin'ny fankatoavan'ny Biraon'ny Indostria sy ny Varotra.Miaraka amin'ny renivohitra voasoratra ao amin'ny RMB 1 lavitrisa, izy dia orinasa mpanao fanorenana manana toetran'ny rafitra vy any Shina.
Manam-pahaizana manokana izahay amin'ny famokarana takelaka vy mahatohitra, takelaka vy mahatohitra ny toetr'andro, takelaka vy firaka, takelaka vy matanjaka, takelaka mitambatra mahatohitra, takelaka tanky, takelaka misy tsindry avo, ary takelaka vy ao anaty sambo.
Izahay no masoivohon'ny orinasa vy malaza any China. Afaka miantoka 100% izahay ny kalitaon'ny entanay.
Faharoa: Manana ivon-toeram-pikarakarana manokana izahay, izay afaka manolotra serivisy namboarina. toy ny fiondrika, lasantsy, fanosehana, fitsaboana harafesina, galvanized.
Fahatelo, manana tahiry mihoatra ny 2000tons izahay, midika izany fa 3-5 andro ihany ny fotoana fandefasana.
Farany, ny orinasa naorina tamin'ny 2010, ka manana traikefa folo taona amin'ny orinasa vy.Tsy isalasalana fa afaka manome ny serivisy matihanina ho anao izahay.
Shandong Kunda Steel Co., Ltd.Ao amin'ny tanànan'i Liaocheng, faritanin'i Shandong, izay tanàna tsara tarehy dia satroboninahitra ho an'ny Venise Tatsinanana.Liaocheng any andrefan'ny faritanin'i Shandong, 200Km atsimon'i Beijing City, 100Km andrefana avy any Jinan City.Jiqing Expressway mamakivaky ny tanàna avy any atsinanana ka hatrany andrefana;Beijing-Kowloon Railway dia mandeha na dia avaratra mankany atsimo, mahazo tombony amin'ny toe-javatra mety amin'ny fifamoivoizana, mivoatra ny toe-karena Liaocheng haingana ary namorona foibe logistika vy lehibe indrindra any Shina Avaratra.
Shandong Kunda Steel Co., Ltd.naorina tamin'ny 2006, mamokatra ny seamless sodina sy ny hatsiaka misintona sodina.
Tamin'ny taona 2010 dia nisoratra anarana sy nanangana orinasa Laiwu Steel Liaocheng Sales Branch, nirotsaka tamin'ny varotra Wear Resistant Steel Plate.
Ny orinasa Kunda Steel dia nankatoavin'ny Birao indostrialy sy ara-barotra tamin'ny taona 2014, nirotsaka tamin'ny fanaovana raharaham-barotra, anisan'izany ny vokatra vita amin'ny vy sy karbaona, takelaka vy, sodina ary bara boribory.
Tamin'ny taona 2016 dia nanangana ny ekipan'ny orinasa iraisam-pirenena.6 olona serivisy ho an'ny mpanjifa vahiny.
Tamin'ny taona 2016, nanorina orinasa sodina welded stainless vy, mamokatra sodina boribory, mahitsizoro ary efamira.
Tamin'ny taona 2017, nanangana ny orinasa firaka, ny famokarana lehibe ny takelaka firaka, ny varavarana firaka, ny fitaratra firaka, ny apron ary ny sisa.
Tamin'ny taona 2018, nanangana ny orinasa Famafazana, mividy milina fanapoahana sy hosodoko vaovao ho an'ny sodina, takelaka sy ny sisa.
Tamin'ny taona 2019, niorina ny atrikasa CNC, nividy milina fanapahana fibre vaovao, milina miondrika, milina fandavahana, milina tsofa.
Tamin'ny taona 2020, lasa vondrona 3 roa ny ekipan'ny fandraharahana iraisam-pirenena.
Ankehitriny Shandong Kunda Steel Co., Ltd.afaka mamatsy ONE STOP SERVICE, avy amin'ny fitaovana fikosoham-bary mamokatra hatramin'ny farany vokatra, ao anatin'izany ny Wear resistant vy plate/Weathering Steel Plate/High Strength Carbon Steel Plate/Stainless Steel/Aluminium/Brass/plate/boribory bar/zoro bar/profil. sy ny sisa.Ireo rehetra ireo dia manana tahiry ho an'ny habe mahazatra, takelaka 2000 taonina, fantsona 1000 arivo sy ny sisa.
Miaraka amin'ny foto-kevitry ny ＂Manatsara hatrany，Win-win Cooperation＂，ary tanterahina amin'ny kalitao azo itokisana sy ny rafitra serivisy aorian'ny varotra, nahazo laza tsara avy amin'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany i Kunda. !
Ny kalitaon'ny vokatra
Fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa